Muxuu Sheekh Umal kaga jawaabay eedeyntii uu u jeediyay Sheekh Soomow? | HalQaran.com
Muxuu Sheekh Umal kaga jawaabay eedeyntii uu u jeediyay Sheekh Soomow?
Muqdisho (Halqaran.com) – Dood xooggan ayaa ka dhalatay muxaadarada Jimcaha maanta ah lagu wado in uu Magaalada Muqdisho ka jeediyo Sheekh Maxamed Cabdi Umal, oo ka mid ah Culima’udiinka Soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn.
Doodaan ayaa waxaa dhalisay hadal uu jeediyay Sheekh C/qaadir Sheekh Maxamuud Abuukar (Soomow), isla-markaana uu kaga horyimid muxaarada la fillayo in Sheekh Maxamed Cabdi Umal uu ka jeediyo Magaalada Muqdisho.
Sheekh C/qaadir Sheekh Maxamuud Abuukar oo ka hadlay sababta ay u diidan yihiin ayaa yiri “Sababta aan ku diidanahay muxaadaradaas waa in ugu horreyn qofka dhigaya uu yahay ninka la yiraahdo Sheekh Maxamed Cabdi Umal. Fikirkaan ay khawaarijtu dadka Soomaaliyeed ku baabi’iyeen ayuu wax badan taageersanaa, ilaa haddana ma ogin meel uu uga tanaasulay, gaar ahaanna culimada Ahlu Sunna Wal-Jamaaca, ee Suufiyada loo yaqaanno wuxuu u yaqaannaa gaalo, marka waxaa layaab leh oo ayaan darro ah in isagoo gaalo noo yaqaanna, dad badan oo ahlu dariiq ahna ay khawaarijtu ku leysay iftadiisa iyo fekerkiisa uu maanta dhaho waxaan u khudbeynayaa agoontii.”
Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo arrintan wax laga weydiiyay ayaa sheegay inaanu waxba kala socon doodda ka taagan muxaarada uu ugu talagalay in uu u jeediyo bulshada reer Muqdisho.
“Anigu ma ogi wax dood ah oo ka jirta muxaadarada, in la iclaamiyay oo aan ku talagashanahay unbaan ogahay.” Ayuu yiri Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee BBC.
Mar wax laga weydiiyay eedeymaha uu u soo jeediyay Sheekh Soomow ayaa wuxuu yiri “Wadaadku waxaan u maleynayaa inuusan warba haynin, ma hurdo ayuu ka soo kacay?, afkaarta uu ka hadlayo haddey tahay middan qolada xagjirka ah ay qabaan, dadka kaliya ee la dagaallamay annagaa ahayn, billowgii ilaa dhammaadkii, oo halis badan u galay, naftooda khatar loo galiyay, culimadeenni baa lagu laayay sida la ogsoon yahay, marka wuxuu ka hadlayo ma garanin, malaha wadaadku wuxuusan la soconin waxa jira, hadduu nin aqoon diimeed leh yahay, adduunka hadda jirana uu la socdo, waxaan u maleynayaa sidaas inuusan u hadleen.”
Maamulka Gobolka Banaadir iyo Saraakiisha Ciidamada ayaan ka hadlin doodda la geliyay muxaarada Sheekh Maxamed Cabdi Umal, waxayse u badan tahay in Sheekhu uu maanta jeedin doono muxaaradiisaan.
Dood ka dhalatay muxaararada Sheekh Maxamed Cabdi Umal
Sheekh Cabdiqaadir Soomow